Ekpere: Chineke nọ mgbe mgbe uche anyị na-awagharị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Mina Del Nunzio - Eprel 9, 2021
con ekpere Chineke ọ dị ugbu a ọbụlagodi mgbe uche anyị na-awagharị. Dị ka ndị Katọlik Katọlik, anyị maara na a kpọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-ekpe ekpere. Ma n’ezie, n’ime afọ ndị mbụ anyị kụziiri anyị ikpe ekpere. Ọtụtụ n’ime anyị na-echeta na anyị na-emegharị akwụkwọ okpukpe ndị nne na nna anyị kụziiri anyị mgbe anyị dị obere ka ha nọdụrụ n’ọnụ akwa ahụ. Na mbụ anyị amaghị kpọmkwem ihe anyị na-ekwu, mana anyị mechara chọpụta na anyị na-agwa Chukwu okwu ma na-arịọ Ya ka Ọ gọzie mmadụ niile anyị hụrụ n'anya tinyere anụ ụlọ anyị ndị bụ akụkụ ezinụlọ.
Ọtụtụ n'ime anyị na-agbasi mgba ike banyere ekpere
Ọtụtụ n'ime anyị na-agbasi mgba ike banyere ekpere. Anyị mụtara ikpe ekpere ka anyị tolitere, ọkachasị mgbe anyị na akwado maka nke anyị mbụ nsọ udo. N’ezie abụ ukwe n’ime ụka, nke, n’ezie, na-abụkarị nkwado okwukwe, ihunanya na ofufe nke Onyenwe anyị. Anyị mụtara ikpe ekpere nke nchegharị ka anyị na-erute oriri-nsọ nke nkwupụta. Anyị kpere ekpere tupu anyị erie nri na maka ndị anyị nwụrụ anwụ mgbe anyị gbakọtara maka olili nke ndị anyị hụrụ n’anya. O nwekwara ike ịbụ na anyị nile na-echeta ikpesi ekpere ike, n'agbanyeghị afọ ole anyị dị ma ọ bụ na anyị nọ, n'agbanyeghị nsogbu nke ụdị ụfọdụ. N'okwu, ekpere bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ anyị dịka ndị kwere ekwe. Ọbụna ndị o yiri ka ha ahapụwo ya nwere ike ikpe ekpere mgbe ụfọdụ, agbanyeghị na ihere nwere ike ime ha maka ya.
Ikpe ekpere bụ naanị ịgwa Chineke okwu
Ikpe ekpere bu ihe mbu, anyi aghaghi ichetara onwe anyi na ekpere di nfe gwa Chineke okwu. Ekpere site na ụtọ asụsụ ma ọ bụ usoro okwu; a naghị atụ ya n'ogologo na imepụta ihe. Ọ bụ nanị ịgwa Chineke okwu, n'agbanyeghị ọnọdụ anyị nọ na ya! Ọ nwere ike ịbụ mkpu dị mfe: "Nyere, Onyenweanyị, a nọ m na nsogbu!"Ọ nwere ike ịbụ arịrịọ dị mfe,"Onyenweanyị, achọrọ m gịNaSir, ihe niile masịwo m ”.
Ekpere bụ mgbe anyị na-anata Oriri Nsọ na Mas
Otu oge dị oke ọnụ ahịa anyị nwere n’ekpere bụ mgbe anyị natara Oriri Nsọ na Mas. Cheedị, anyị nwere Jesus Oriri Nsọ n'aka anyị ma ọ bụ n'ire anyị, otu Jizọs ahụ anyị nụrụ banyere oziọma a ka gụrụ. Lee ohere ọ bụ ikpe ekpere maka ezinụlọ anyị “; rịọ mgbaghara maka adịghị ike anyị "Ọ dị nwute, Onyenwe anyị maka iwe gị n'ihe m gwara enyi m "; jụọ, kelee ma ọ bụ too Jizọs onye nwụrụ maka anyị ma biliekwa nkwa inye anyị ndụ ebighị ebi ”Onye ọ bụla riri anụ ahụ́ m, drinksụọkwa ọbara m agaghị anwụ ma ọlị.
Achọrọ m ikwu ihe dị ezigbo mkpa n’ekpere. N'oge uka, ma ọbụ ọbụna na nzuzo oge anyị nwere ike ịnọdụ ọdụ ma soro Onye-nwe kwue okwu, anyị nwere ike ịchọta uche anyị juputara n'ihe ndọpụ uche, na-awagharị ebe niile. Anyị nwere ike ịda mba n’ihi na, ọ bụ ezie na anyị bu n’obi na-ekpe ekpere, o yiri ka anyị adịghị ike ná mgbalị anyị. Cheta, ekpere dị n'obi, ọ bụghị n'isi.
Mkpa ọ dị ikpe ekpere n’ime obi. Oge ana-adọpụ anyị uche apụtaghị na oge ekpere anyị lara n'iyi. Ekpere bu n'ime obi na ebumnuche na yabụ oge anyị na-enye Onye-nwe-anyị n’ekpere, ma-ọ bụ iji chaplet ma-ọbụ n’ọgbakọ tupu uka ma-ọbụ n’oge nke ikpere n’obi mgbe anyị nọ naanị anyị. Ihe ọbụla bụ, ọ bụrụ n ’ọchịchọ anyị ikpe ekpere, mgbe ahụ ọ bụ ekpere n’enweghị ihe ndọpụ uche na nchekasị. Chineke na-ele obi anyị mgbe niile.
Ikekwe ọ dịla gị ka ikpeghị ekpere n'ihi na ị na-atụ ụjọ na ị gaghị emeli ya n'ụzọ zuru oke ma ọ bụ chee na mbọ gị erughị eru ma ọ bụdị na-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Ka m gbaa mbọ hụ n’achọ gị n’onwe ya Chineke. Chineke nwere ike ịgụ ma ghọta obi gị nke ọma. Ọ hụrụ gị n'anya.